Imikhiqizo Yezimali | Ezezimali Ezezimali (Ikhasi 3)
Okunye ukushintshana ukubhekana nokubalekela ukungazinzi kwezepolitiki eSpain
Abatshalizimali bangezinye zezingxenye ezikhathazeke kakhulu ngokungazinzi kwezepolitiki eSpain, lapho bazovota khona ngoNovemba 10.
6 ukuphepha okunenzuzo enenzuzo enkulu ngaphambi kokungenzeka
Isabelo singaba inketho yokufakwa kumaphothifoliyo wabatshalizimali ngezikhathi zokungazinzi.
Uyini umshuwalense wokutshala imali nokuthi ungawuqasha kanjani?
Umshuwalense wokutshalwa kwezimali uhlose ukusebenzisa imigomo emide kunokujwayelekile, phakathi kweminyaka eyi-10 nengu-15 cishe futhi kuya ngezidingo.
Ukuhlaselwa kwezindawo zokucwengiselela zaseSaudi Arabia kuzothinta kanjani izimakethe?
Ngemuva kokuhlaselwa eSaudi Arabia, abahlaziyi bakholelwa ukuthi inani lentengo engahluziwe lingaya kumkhawulo ka- $ 100 emgqonyeni.
Izici zamakepisi amakhulu: izinzuzo nezinkinga zawo
Ngaphakathi kwenkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35, kunamanani athile achazwe kakhulu athathwa njengokuphakeme. ikepisi elikhulu
Amasu ayi-7 okusebenza ngamanani aphansi
Akumangalisi ukuthi kusazodingeka siphile ngamanani wenzalo aphansi kakhulu, noma sinembuyiselo engemihle.
Ikusasa lemali yezohwebo
Enye yezinzuzo ezikhiqizwe ikusasa lemali ukuthi unezimali eziningi ongazisebenzisa lapho usebenza khona: ama-US dollars.
Isimo sokhetho olusha singayithinta kanjani imakethe yamasheya?
Uma kunomkhakha wezezimali ongalimala ngokhetho olusha, kungugesi, njengoba kuyisigaba esilawulwayo.
Ukufakwa kwemali: zinjani futhi zinenzuzo enkulu?
Imali yamazwe angaphandle iyithuluzi elingazinzile lokwakha imakethe yokonga esikhathini esifushane naphakathi.
Izimpahla zezimali eziyi-5 ezinobungozi obuningi, kepha ezinamandla amakhulu wokubuyekeza
Uma kukhona impahla yezezimali exhunywe nemisebenzi eyingozi, lokho ngokungangabazeki kunanoma iyiphi imali ebonakalayo ngenxa yokuguquguquka okuphezulu okukuvezayo.
Amazinga okuvula ngawo izikhundla emakethe yamasheya
Unezinhlelo lapho ungangena khona ezimakethe ze-equity ngeziqinisekiso eziningi zempumelelo emazingeni athile.
Izeluleko eziyi-7 zokwenza ngcono ukubuya kotshalomali
Isamba sokugcina salo nyaka kufanele sisebenzele abatshalizimali abancane nabaphakathi ukwenza amasu amahle kakhulu okutshala imali ukuze babe Nesigaba sokugcina salo nyaka kufanele sisebenzele abatshalizimali abancane nabaphakathi ukuthuthukisa njengezeluleko zamasu okutshala imali inhloso yawo enkulu ukuthuthukisa ifa lethu lomuntu siqu noma lomndeni.
Izeluleko eziyi-6 zokutshala imali ezimakethe zamasheya ngempumelelo
Esinye sezeluleko ezinhle kakhulu zokutshala imali ezimakethe zezimali kuzoba ukukwazisa ukufunda okuthile ekusebenzeni.
UFerrovial umhlabeleli wezinkampani zokwakha
Izitoko ze-Ferrovial ngokusobala zinamandla okwamanje kanye nalesi sikhashana, ngaphandle kwesibonakaliso sobuthakathaka ukuvala izikhundla.
Ukutshala imali emakethe yamasheya ngamadiphozi amathemu
Imali ebhange exhunywe ezimakethe zamasheya idinga amatemu amade futhi angafika eminyakeni emi-3 noma emi-4 kanye nenzalo eqinisekisiwe encane.
5 okhiye bokuthatha imali yokubambisa
Ngaphakathi emakethe ye-real estate kunento eyodwa eqiniseke kakhulu futhi lokho ukuthi kusukela manje ukuqasha isikweletu kuzobiza kakhulu kubantu ukwedlula Ngaphakathi emakethe ye-real estate kunento eyodwa eqiniseke kakhulu futhi lokho ukuthi kusukela manje kuya phambili ukuqasha isibambiso kubize kakhulu kubantu abafisa ukuthenga ifulethi futhi ngenxa yalesi sizathu kufanele bacabangele okhiye abathile
Amasu okutshala imali engxenyeni yokugcina yonyaka
Elinye lamasu ongawasebenzisa kule ngxenye yokugcina yonyaka ukukhetha amasheya asabalalisa inzuzo ephezulu
Kukhona ukungabaza izimakethe zezimali okusamele zikuxazulule?
Bekuhlale kushiwo ukuthi isitha esikhulu sezimakethe zamasheya ukungabaza okudalwa emnothweni, kwezepolitiki kanye nasemhlabeni Kuhlale kuthiwa isitha esikhulu sezimakethe zezimali ukungabaza okwenziwa kwezomnotho, kwezepolitiki kanye nakwezomnotho. umhlaba webhizinisi
Ukwehliswa kwentengo ebekiwe yamabhange
Ukulungiswa kwamanani entengo yamabhange asohlwini sekuyinto ejwayelekile kulezi zinsuku nokuthi angamazinga aphansi kakhulu eminyakeni yamuva.
Izindlela zokwandisa inzuzo yakho ekuhwebeni emakethe yamasheya
Akungabazeki ukuthi ukuphepha okucatshangelwayo kungomunye umthombo wokuzuza kwemali etholakalayo noma ukuzuza kwenani eliphezulu.
Ukuhamba kwezindiza kuyakhula eSpain: okulungele amanani ezivakashi
Akukho ukumelwa okunamandla kakhulu ohlangothini lwezindinganiso zabavakashi ezihambelana kakhulu nomnotho wezwe futhi okunganikeza inzuzo enkulu.
Yiziphi izindinganiso zemakethe yamasheya yaseSpain ezithintwe yiBrexit?
Kuyaziwa ukuthi iBrexit igama eliqanjelwe ukubhekisa ekuphumeni kwe-United Kingdom kwi-European Union. Kepha okungaziwa kwesinye isikhathi Kuyaziwa ukuthi iBrexit yigama eliqanjelwe ukubhekisa ekusukeni kwe-United Kingdom ku-European Union
Uhlangothi oluhle lwalokhu kusebenza kweTelefonica ezimakethe zamasheya ukuthi isivuno saso sezabelo manje sesiphezulu kunangaphambi kwehlobo.
Ukutshalwa kwezimali ngezinkampani zomshuwalense
Kusenenkolelo engxenyeni enhle yabasindisa ukuthi imikhiqizo yokutshala imali nokonga ingavunyelwa kuphela kwenye yezinto ezintsha izinkampani zomshuwalense ezikhona ukumakethwa komshuwalense wokonga izingane
Ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza kwamadiphozithi?
Njengoba ubhekene nokwehla okubonakalayo ezimakethe zamazwe zamasheya, enye yezinketho zokuphatha ukonga kungamadiphozithi asebhange.Ngxenyeni yesibili yonyaka, kungaba yisikhathi sokuthola imali ebhange lesikhathi esinqunyiwe ngoba yize kunenzalo ephansi amasu ahlukene esingakhuphula ngawo ukusebenza kwakho
Amaleveli okufanele abukwe ku-Ibex 35
Empeleni, iphuzu lokuphikisana ligxile emazingeni aphakathi kwamaphoyinti angama-8.700 8.900 kanye no-XNUMX XNUMX, okuyizinga lamaconsi okugcina.
Ukwehla kwamandla emali kwehlele ku-1%, kuthinta kanjani?
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu lapho kukhonjiswa khona izinga lokwehla kwamandla emali lonyaka wukukhuliswa kwenani lempesheni yomphakathi.
Ingabe inani elihlosiwe esitokisini lithembekile?
Intengo ebhekiwe yesabelo yinani umhlaziyi wezimakethe zezimali alinganisela ukuthi kungenzeka noma kungahlangatshezwana nalo.
Izisekelo eziyingozi zamanani emakethe yamasheya aseSpain
Elinye lamasu wokufeza inhloso yakho ekutshalweni kwezimali ezimakethe ezingenayo ngokungangabazeki ukuqapha ukwesekwa abanakho kuLinye lamaqhinga okufeza inhloso yakho ekutshalweni kwezimakethe ezingenayo akukho kungabaza ukuthi lokho ukuqapha ukwesekwa abanakho ekuhlaziyweni kwabo kwezobuchwepheshe
9 Izindlela zokungangeni ezikweletini ezimakethe zamasheya
Enye yezingozi ezinkulu ezibandakanyeka ekutshalweni kwezimali ezimakethe ezingenayo ukuthi kungenzeka ukuthi usesimweni sesikweletu. Ngamanye amagama, enye yezingcuphe ezinkulu ezibandakanyeka ekutshalweni kwezimali ezimakethe ezingenayo ukuthi kungenzeka ukuthi usesimweni sokukweleta futhi ngenxa yalokhu kukhona okhiye bokukugwema
Izindinganiso ezinhle kakhulu zokusebenzisa ukugeleza kwezivakashi eSpain
Maphakathi nenkathi yehlobo, iSpain iba yindawo yabantu abaningi abakhetha izindawo zayo kanye namadolobha ukwenza uhambo lwabo.Phakathi nesikhathi sehlobo, iSpain iba yindawo yabantu abaningi abakhetha izindawo zabo namadolobha ukwenza izindawo zabo amahambo ngaphakathi kokugeleza kwabavakashi okukhona, maqondana nengxenye ekhishwayo nakwamanye amazwe
Umkhakha webhange onobuchwepheshe obucayi kakhulu
Omunye wemikhakha esebenza kabi kakhulu kulo nyaka ezimakethe zokulingana ngokungangabazeki umkhakha wamabhange. Inikeza omunye wemikhakha ngokusebenza okubi kakhulu kulo nyaka ezimakethe zezimali ngokungangabazeki umkhakha wamabhange.
IAG empambanweni yomgwaqo e-Ibex
Esinye sezici ezinhle ze-IAG ukuthi isabalalisa abaninimasheya bayo enye yezinzuzo ezinkulu kakhulu zezimali zikazwelonke.
Ukuphepha kweSpain kuvezwe kakhulu e-Argentina
Ukwehlulwa okhethweni kukahulumeni okhona manje e-Argentina kuholele ekuweni kwemakethe yamasheya aseMelika ngamandla amakhulu.
Ukhetho eSpain nase-Italy ngaphambi kokuphela konyaka?
Ithuba lokuba nokhetho eSpain nase-Italy ukwenzeka kulokhu kuwa liholele ekutheni inkomba yemali engenayo yaseSpain, i-Ibex 35, iye ezingeni eliphansi minyaka yonke.
Izinyathelo zokuthenga indlu
Ukutholwa kwendlu kungumsebenzi obaluleke kangangoba ngeke ukwazi ukushiya noma isiphi isikhala ezandleni zokuphuculwa. Uma kungenjalo, kuzoba njalo.Ukuthenga indlu kungumsebenzi obaluleke kangangoba ngeke ukwazi ukushiya noma isiphi isikhala sokuvuselelwa. Uma kungenjalo, kuzoba inqubo edinga ukuhlela okuningi nezinga elithile lokuzinikela.
Ngabe kungcono ukuba seBanco Santander noma e-BBVA?
Kukhona i-denominator phakathi kwe-Santander ne-BBVA futhi lokho ngukuthi ezimweni zombili bakhokha izabelo kubaninimasheya, ngenzuzo ecishe ibe ngu-5%.
Ingabe i-CPI ikuthonya kanjani ukutshalwa kwezimali?
I-CPI ephezulu ingadala ukungezwani okufanele ezweni noma esikhaleni sezomnotho, kuze kufike ezingeni lokuthi enye yezimakethe ezithinteke kakhulu yilezo zemali.
I-Ibex 35 iqala ukwehla ngokwehla ngaphansi kwamaphoyinti angama-9.000
Inkomba ekhethiwe yezimali zaseSpain, i-Ibex 35, ivaliwe ngemuva kwezinyanga eziningi ingaphansi kwezinga elibalulekile lamaphoyinti angama-9.000.
Ibex 35 ingadiliza amaphuzu angama-9.000
Ukuqhuma okugcwele kwezimali zeSpain ezizonqotshwa yi-downtrend entsha. Ngemuva kwenkomba ekhethiwe yeVolantazo yokukhethwa kwamasheya aseSpain esezonqotshwa ukwehla okusha. Ngemuva kwenkomba yokukhetha kazwelonke, i-Ibex 35, isizobekwa ngaphansi kwamaphoyinti ayi-9.000
Izinto ezi-6 ezizonquma ukuvela kwemakethe yamasheya engxenyeni yesibili yonyaka
Akungabazeki ukuthi ingxenye yesibili yonyaka izoba nzima kakhulu ukubhekana nezimakethe zezimali. Lapho kunezici eziningi ukuthi Akungabazeki ukuthi ingxenye yesibili yonyaka izoba nzima kakhulu ukubhekana nezimakethe zezimali. Lapho kunezici eziningi ezinganciphisa ibhalansi kolunye uhlangothi noma kolunye
Ukuhamba, ezokungcebeleka nemfashini, imikhakha ebaluleke kakhulu ye-eCommerce
I-ECommerce ingenye yemikhakha evelayo emalini e-United States, enenkambiso ecacile eya phezulu.
INokia Gamesa iyawa emakethe yamasheya
Akunakulibaleka ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, inhloso ye-Siemens Gamesa ibiyi-18 noma i-20 euros ngesabelo ngasinye.
Ubuholi beBBVA obusolwa ngenkohlakalo: buzoyithinta kanjani imakethe yamasheya?
Esimweni semakethe esingesihle neze, iqiniso lokuthi ubuholi be-BBVA busolwa ngenkohlakalo lingaba nemiphumela ekhathazayo kakhulu.
Isilinganiso semali ebolekwayo yi-123.911 euros
Isibalo semali ebolekiwe emakhaya abhaliswe kumarejista ezindlu ingama-31.018, 9,2% ngaphezulu esilinganisweni sonyaka. Le yimininingwane efanelekile.Isilinganiso esimaphakathi singama-euro ayizigidi eziyi-123.911, ngokunyuka okungu-2,9%, kanti inani eliphakathi lemali mboleko ebhaliswe kumarejista ezakhiwo ngoFebhuwari (kusuka kuzenzo zomphakathi ezenziwa phambilini) kungama-euro ayi-163.487
AbaseSpain bazofuna imali mboleko ukuze basebenzise amaholide
Ngesikhathi samaholide ehlobo kulo nyaka, ama-60% abantu baseSpain (okungukuthi, ingqikithi yabahlali abayizigidi ezingama-28,04) bazoya eholidini futhi Ngesikhathi samaholide ehlobo kulo nyaka, ama-60% abantu baseSpain (okungukuthi, inani eliphelele labantu abangama-28,04 million) hamba uye eholidini.
Amasheya ama-3 anezinketho zezingcingo ku-Ibex 35
Ibex 35 ingenye yama-stock indices njengamanje ebuthakathaka ngaphakathi kwamasheya aseYurophu. Kodwa noma kunjalo, kunamanani amathathu I-Ibex 35 ingenye yama-stock indices njengamanje ebuthakathaka ngaphakathi kwamasheya aseYurophu, kepha noma kunjalo, kunamanani amathathu akhombisa isici sobuchwepheshe esingenakulinganiswa
Amathiphu wokutshala imali ekuhwebeni kwangaphakathi
Okubizwa nge-intraday yimisebenzi ethwala ubungozi obukhulu kunokunye ngoba noma yiliphi iphutha olenzayo lingabiza kakhulu,
Yimaphi amanani okufanele afakwe kwiphothifoliyo kuleli hlobo?
I-Naturgy ingenye yamagugu e-Ibex 35 ekhombise ithoni ye-bearish enamandla kakhulu ngenyanga kaJulayi
Abahlinzeki bomshuwalense bonga amaklayenti abo € 47,90 nge-euro ngayinye abayichitha ekuphenyweni kwamacala okungenzeka okukhwabanisa. Lesi ngesinye seziphetho sokuthi abomshwalense bonga amaklayenti abo ama-euro angama-47,90 njengemali abayabelwe ukuphenya amacala okukhwabanisa
Ukhetho olungaba khona e-Italy ludiliza izimakethe zamasheya okuphathelene nomngcele
Ukuwa kwe-Ibex 35 bekuseRoma, lapho imali ekhokhelwa ubungozi yase-Italy inyuke yaba ngamaphoyinti ayisisekelo ayi-193 kanti namabhange ayengomunye wemikhakha emibi kakhulu ezindaweni zokuhweba ngamasheya.
Imvelo ye-Macroeconomic yemakethe yamasheya
Impela, imvelo ye-macroeconomic emakethe yamasheya izothatha isinqumo esikhulu ukuze ezinyangeni ezizayo sikwazi ukwenza iphothifoliyo efanelekile yokutshala izimali. Yebo, imvelo ye-macroeconomic emakethe yamasheya izothatha isinqumo esikhulu ukuze ezinyangeni ezizayo sikwazi ukwenza Iphothifoliyo yokutshala imali efanele futhi elinganiselayo, ngenhloso yokwenza amaphutha ambalwa ngangokunokwenzeka
Izindleko ezihilelekile ekuthengisaneni emakethe yamasheya
Akungabazeki ukuthi konke okwenziwayo emakethe yamasheya kufaka izindleko ezihleliwe, njengokusebenza kwasebhange okuyikho ngempela. Ngoba empeleni, uma kukhulunywa ngokulinganisa akumele ukhohlwe ukuthi amabhange azokukhokhisa kabili amakhomishini, ngesikhathi sokuthenga nokuthengisa amasheya
Izikhathi zokuthengisa amasheya ngendlela efanelekile
Isikhathi sokuthengiswa kwamasheya singenye yezinto ezibaluleke kakhulu emisebenzini yabatshalizimali ngoba imiphumela ibekelwe umkhawulo.
I-Cellnex phakathi kwezintandokazi zamabhange otshalo-mali
Enye yezinto ezimangazayo ezinhle kulo nyaka maqondana nokuphepha okwakha inkomba ye-equity equity yi-Telecom Cellnex.
Ziyini izimakethe zekusasa?
Ngokuqiniseka okukhulu ukuthi kwesinye isikhathi uzobe uzwile ngezimakethe zesikhathi esizayo futhi kungenzeka ukuthi wake walingeka ukuba udlale. Izimakethe zesikhathi esizayo ngokuyinhloko ukwakhiwa kwezinkontileka zokuthengwa noma ukuthengiswa kwezinto ezithile esikhathini esizayo.
Ukuguqulwa kwesimo kugesi: zizothengisa
Ngesikhathi esingalindelekile kube noshintsho ezinkampanini zikagesi. Ukusuka ekuthengeni uye ekuthengiseni emasontweni ambalwa.
Amasu ayisikhombisa okwenza imali oyongile izuze ngo-7
Ukuze kutholakale izimbuyiselo eziphezulu, kuzodingeka ukuthi ubhekele ezinye izindlela zokutshala imali ezintsha. Njengesibonelo, ngenkontileka ka-Ukuze uthole izimbuyiselo eziphakeme, kuzodingeka ukuthi ubhekele ezinye izindlela ezintsha zokutshala imali, njengokuthola inkontileka yamadiphozithi asebhange angomahamba nendlwana noma ukutshala igolide ukukhuthaza ukonga.
IAG elinye lamanani okufanele licatshangwe ku-radar
Esinye sezitoko ezisebenza kakhulu ezimakethe zezimali njengamanje ngokungangabazeki ulayini womoya we-IAG.
Impi phakathi kwe-US ne-Iran ingase iphumele obala
Isigameko sakamuva esinezindaba ezithinta izimakethe zezimali zokulingana yimpi engaba khona phakathi kwe-US ne-Iran. Empeleni sekuvele kwabaningana Isehlakalo sakamuva esifanele izindaba ezithinta izimakethe zokulingana kwezezimali kungenzeka kube yimpi phakathi kwe-US ne-Iran.
Qasha: umehluko phakathi kwediphozithi nediphozi?
Esinye sezici lapho impikiswano inkulu khona ukwehlukanisa lokho empeleni okuyidiphozithi nesiqinisekiso.
Siyini isibalo somvikeli wabatshalizimali?
Le mibuzo, eqhamuke kubantu abangama-90%, ibigxile enanini lentengo eliphansi lezokuphepha kanye nakwibhidi yokuthatha i-Abertis. Ihhovisi Ihhovisi Lomvikeli Wabatshalizimali baseMadrid Stock Exchange liphathe izicelo eziyi-13.250 zolwazi ngo-2018, u-2,3% ngaphezu kwezicelo eziphendulwe ngonyaka owedlule, lapho imibuzo engama-90% yenziwa ngabatshalizimali abazimele.
Ukwehla komkhakha wezamandla emakethe yamasheya aseSpain
Akuvamile ukuthi izinkampani zamandla ziziphathe ngale ndlela engazelelwe ezimakethe zokulingana zasekhaya.
Utshalomali: amakilabhu ebhola athola cishe i-19% ngaphezulu
Indlela yasekuqaleni yokwenza ukonga kube nenzuzo ngebhola futhi iqondiswe ngqo ku-STOXX Europe Football. Lapho zikhona Indlela yasekuqaleni yokwenza ukonga okunenzuzo ngebhola futhi iqondiswe ngqo ku-STOXX Europe Football, lapho amanye amakilabhu ebhola ebaluleke kakhulu ezwekazini elidala ahlanganisiwe
Amaphutha ama-6 okufanele uwenze esikhwameni
Njengoba bonke abatshalizimali bazi, noma iliphi iphutha isu lakho lokutshala imali lingaphazamisa izinhlelo zakho zokwenza ukulondolozwa kwakho kube nenzuzo. Ngakho-ke, njengoba bonke abatshalizimali bazi, noma yimaphi amaphutha isu labo lokutshala imali angaphazamisa izinhlelo zabo zokwenza ukonga kwabo kube nenzuzo.
I-Endesa isizokuchaza yona
Elinye lamagugu okwamanje elivusa ukulindela okukhulu phakathi kwabatshalizimali abancane nabaphakathi nse yinkampani kagesi i-Endesa. Elinye lamagugu avusa ukulindela okukhulu okwamanje kubatshali zimali abancane nabaphakathi nse yinkampani kagesi i-Endesa
Ence kusalindwe ukuvalwa kwe-Pontevedra cellulose
Ukulindela kwe-ENCE ezimakethe zezimali njengamanje kuncike esinqumweni esingenzeka sokuvala isigayo sePontevedra pulp. Ukulindela kwe-ENCE ezimakethe zezimali njengamanje kuncike esinqumweni esingenzeka sokuvala uginindela wasePontevedra
Ukuphepha okunamandla amakhulu kakhulu okwazisa ku-Ibex 35
Okwesele konyaka, i-Ibex 35, iyonke, inokubuyekezwa okungaba khona kumanani ayo acishe abe yi-16%.
I-ACS iqinisa isikhundla sayo ezimakethe zamasheya zaseSpain
Uma kukhona ukuphepha okukhombisa ukuthambekela okungenakubekwa phezulu, akuyona enye ngaphandle kwenkampani yokwakha ye-ACS. Kuze kube seqophelweni lokuthi kukhombisa isici sobuchwepheshe Uma kukhona ukuphepha okukhombisa ukuthambekela okungenaphutha okuphezulu, akuyona enye ngaphandle kwenkampani yokwakha i-ACS, kuze kufike eqophelweni lokuthi ikhombisa isici sobuchwepheshe esingenaphutha
Igolide Elibheke Kuzo Zonke Izikhathi Eziphakeme
Ngaphandle kokungabaza, enye yezimpahla zezezimali ezisebenza kahle kakhulu kulo nyaka igolide. Ijabulele ukufika kuma-60%, enye yezimpahla zezimali ezisebenze kahle kakhulu kulo nyaka igolide kanti i-h% ibonge kuze kufike kuma-60%, okungenye yezindawo eziphakeme kakhulu kuzo zonke izimakethe zezezimali
Ama-savers angama-70% atshale imali efinyelela kuma-euro angama-50.000
Sifaka kuphi imali esiyongayo? Lo ngumbuzo obalulekile ukucacisa ukuthi iyiphi imephu yokutshala imali ezweni lethu. Iqiniso elitangaza ikakhulukazi kulokhu kuhlaziywa ukuthi le mikhiqizo emibili yezezimali enokuqagela okukhulu phakathi kwabasindisi akubandakanyi ukuthengwa nokuthengiswa kwamasheya.
I-Enagás, igugu lemakethe yamasheya aseSpain
I-Enagás ithole ngo-2018 inzuzo ngemuva kwentela (BDI) yama-euro ayizigidi ezingama-442,6, emele ukukhula kwe-1% ngokwemigomo u-Enagás ayitholile ngo-2018 inzuzo ngemuva kwentela (BDI) yama-euro ayizigidi ezingama-442,6, emele ukukhula kwe-1% ngamagama afanayo
I-Enagás, inika izimpawu zokuqala ze-alamu
Kubonakala kungamanga kuleli phuzu lonyaka, kodwa esinye sezitoko ezibukeka zimbi kakhulu okwamanje yinkampani kazwelonke yegesi i-Enagás. Kuze kube manje Kubukeka sengathi kungamanga kuleli phuzu lonyaka, kodwa esinye sezitoko ezibukeka zimbi kakhulu okwamanje yinkampani kazwelonke yegesi i-Enagás
Amaresiphi wokugwema ukuthengisa inani
Kumele kukhunjulwe njalo ukuthi lapho ukulahleka kwemali kwenzeka ezimakethe zezimali, kungukuhluleka kwecebo labatshalizimali. Kuzo zonke, awukwazi ukukhohlwa ukuthi ukuthengisa amasheya kungadalwa ukungabi nalwazi kwezimakethe zezimali
Ngabe i-Iberdrola ingaya phezulu emakethe yamasheya?
Akukho ukuthi esinye sezibambiso ezithengisa kakhulu ezimakethe eziguquguqukayo yinkampani kagesi yase-Iberdrola. Kuze kube seqophelweni lokuthi ku-Akukho nokuncane lapho ukuphepha okushintshaniswa kwamasheya ezimakethe eziguquguqukayo ezingenayo yinkampani kagesi i-Iberdrola futhi kuze kube sezinyangeni ezimbalwa ikhuphuke ezikhundleni zayo yaba ngama-euro angama-9 ngesabelo ngasinye.
UDonald Trump akanandaba nokuwa ezimakethe zamasheya
Lapho cishe sesiphakathi nesikhathi segama likamongameli waseMelika, uDonald Trump, kunento eyodwa eqinisekile esingayisho. Ukuvela kokuthi Lapho sesicishe saba maphakathi nesikhathi soMongameli wase-United States, uDonald Trump, kunento eyodwa esingayisho ngokuqinisekile futhi lokho ukuthi ukuvela kwezimakethe zezimali kube kuhle futhi kwasiza izintshisekelo yabatshalizimali abancane nabaphakathi
Asebenza kanjani amapulatifomu e-cryptocurrency?
Ngaphakathi emkhakheni wokutshalwa kwezimali, kuye kwakhiwa uchungechunge lwamapulatifomu okuhweba ngenhlalo yomphakathi enikeza ithuba lokutshala imali kumasheya futhi Inkinga enkulu kunayo yonke lezinkundla zokutshala imali kuma-cryptocurrensets ukuthi ahlinzeka ngokuphepha okukhulu ezisekelweni zawo zobuchwepheshe
Imikhiqizo enobungozi bokutshala imali
Vele kukhona impilo edlula imakethe yamasheya futhi phakathi kwabo kuvela uchungechunge lwemikhiqizo engaziwa ngabatshalizimali okubandakanya okuningi Yebo kunjalo kukhona impilo edlula imakethe yamasheya futhi phakathi kwabo uchungechunge lwemikhiqizo engaziwa egqamile. ingozi enkulu ekusebenzeni kwabo
Ukulwa ne-Italy neBrussels
Imiphumela yokhetho lwePhalamende laseYurophu eyabanjwa ngoMeyi 26 ingahle iholele empikiswaneni entsha phakathi kwe-Italy neBrussels engahle iholele Emiphumeleni yokhetho lwePhalamende laseYurophu eyabanjwa ngoMeyi 26 ingaholela engxabanweni entsha phakathi kwe-Italy neBrussels engaba umthelela ezimakethe zokulingana zezwekazi elidala
Kuyini ukuhweba emakethe yamasheya?
Ukuhluka okuvame ukusetshenziselwa ukuhweba izimakethe zokulingana ukuhweba kwezibambiso ezithengiswa esidlangalaleni. Ukuhluka okuvame ukusetshenziselwa ukuhweba izimakethe zamasheya ukuhweba kwizibambiso zezimakethe ezithengiswa esidlangalaleni.
Izindlela zokupheka eziyi-10 zokunciphisa ukulahleka emakethe yamasheya
Enye yezinhloso eziseqhulwini zanoma yimuphi umtshalizimali omncane naphakathi ukuvimbela ukulahleka ukuthi kufakwe kuphothifoliyo yabo yokutshala imali. Noma iyiphi yezinhloso eziseqhulwini zanoma yimuphi umtshalizimali omncane naphakathi ukuvimbela ukulahleka ekufakweni kwiphothifoliyo yabo yokutshala imali
Ungayitshala kanjani isiliva?
Imakethe yamanje yezezimali ivumela ukuthi kutshalwe imali esiliva ngezindlela ezahlukahlukene zokutshala imali. Kusuka kokukhululeke kakhulu nokwendabuko okuyisimo sezimali Abatshalizimali njengamanje bangazithola sebenendawo elinganiselwe yezimakethe nemikhiqizo evezwe esiliva, ezinkampanini zezimayini ezithengiswa esidlangalaleni
Umhlangano wenyanga kaMashi yi-European Central Bank (ECB) uveze ukuthi abahlaziyi bezezimali bebebheke ini. Ngamanye amagama, amanani enzalo endaweni ye-euro azoqhubeka njengoba ebekade enjalo futhi ngeke avuke ekuqaleni konyaka, esimweni esijezisa isenzo sabasindisi.
I-Bankinter ivale ngempumelelo futhi ngamahora amathathu nje kuphela ukubekwa emakethe kwenkinga yesikweletu esikhulu esigabeni sayo esikhethiwe senani le-Bankinter kuvaliwe ngempumelelo futhi ngamahora amathathu nje kuphela ukubekwa emakethe kwenkinga yesikweletu esikhulu esigabeni esikhethiwe ngemali engama-euro ayizigidi ezingama-500, ngaphezu kweminyaka emihlanu, esemajini wamaphuzu ayisisekelo angama-75 ngaphezulu kwe-midswap
ITelefónica yehluleka ukufinyelela emazingeni ama-euro angama-8
Esinye sezokuphepha esinomthamo omkhulu kakhulu wezivumelwano enkombeni ekhethiwe kazwelonke, i-Ibex 35, yi-teleco Telefónica. Kodwa futhi ingenye yezokuphepha ezinomthamo omkhulu kakhulu wezivumelwano enkombeni ekhethiwe kazwelonke, i-Ibex 35, yi-telecom Telefónica, kodwa futhi ingenye yezokuphepha ezidala ukudumazeka kakhulu phakathi kokuncane naphakathi abatshalizimali
I-Acciona, enye yezindinganiso ezinesici esihle kakhulu sobuchwepheshe
Elinye lamavelu enkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35, elenze kahle ezinyangeni ezedlule kube elinye lamavelu enkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35, esebenze ehamba phambili Ezinyangeni ezedlule, u-Acciona ubelokhu
Broker ukusebenza emakethe ye forex
Enye yezindlela ezingasetshenziswa ekutshalweni kwemali imelwe yizimakethe zezimali zemali. Lolu hlelo lokushintshisana ngezimali zamazwe omhlaba Ngaphakathi kokuqukethwe okujwayelekile kwemali yamazwe omhlaba, akungabazeki ukuthi ingxenye yenzuzo idlala indima ebaluleke kakhulu kusukela manje.
Amamodeli we-TV emakethe yamasheya ngaphansi kokuhlolwa: I-Mediaset ne-Atresmedia
Lezi akuzona izikhathi ezinhle zabezindaba ezibukwayo ezibalwe kumasheya aseSpain. Bacwiliswe esiteshini esehla Esikhathini samanje sokuhweba, amasheya akwaMediaset España ahamba ngokuqina okuqinile, phezulu naphansi.
Ukuhlanganiswa okungenzeka kweMediaset nomzali wayo
Esinye sezitoko ezishisa kakhulu emalini yaseSpain kulezi zinsuku ngokungangabazeki iMediaset. Kuze kube seqophelweni lokuthi iNational Commission of Must ikhumbule ukuthi iMediaset Spain yenze imali engango-2.263 million euros ku-Ibex 35, ngakho-ke le nhlangano izoba nezindleko ezibalelwa ku-1.200 million euros.
Izinkomba ezifanele kakhulu zemakethe yamasheya aseSpain
I-Barcelona Stock Exchange, eyingxenye yeqembu leBolsas y Mercados Españoles (BME), iqhubekile nokubuyekeza ukwakheka nokukalwa kwezinkampani Mhlawumbe abatshalizimali abaningi abazi ngakho njengamanje, kepha izimfihlo ezisabalalisa izinzuzo phakathi kwabo abanikazi bamasheya bahlanganisiwe kuma-indices wezici ezahlukahlukene
Ungayengeza kanjani impesheni ephansi yabantu abathathe umhlalaphansi?
Impesheni emaphakathi eSpain ikhule ezikhathini zamuva cishe ku-6%. Kuze kube kufinyelela inani lama-euro angama-985,16 ngenyanga, ngokusho kwedatha Impesheni emaphakathi eSpain ikhule ezikhathini zamuva cishe nge-6%. Kuze kube kufinyelela inani lama-euro angama-985,16 ngenyanga, ngokusho kwedatha enikezwe nguMnyango Wezabasebenzi
Ngabe kukhona noma akukho ukwehla kwamandla omnotho emnothweni wamazwe omhlaba?
Esinye sezici ezijezisa kakhulu izimakethe zamasheya iqiniso lokuthi umnotho ungaba sesimweni somnotho Esinye sezici ezijezisa kakhulu izimakethe zezimali ukuthi kungenzeka kube sezomnotho emnothweni wamazwe omhlaba
Ibex 35 ngaphansi kwamaphoyinti ayi-9.000
Njengoba bekulindelekile, izinto azihambi kahle enkombeni ekhethiwe yezimali zaseSpain, i-Ibex 35, yalesi sigaba sesibili sonyaka. Njengoba bekulindelekile, izinto azihambi kahle enkombeni ekhethiwe yezimali zaseSpain, i-Ibex 35, yalesi sigaba sesibili sonyaka wamanje
Izinga lenzalo ngeke likhuphuke kuze kufike engxenyeni yokuqala ka-2020
I-European Central Bank (ECB) ithathe isinqumo ngalo Lwesine sokugcina inzalo ingashintshi kuze kube yingxenye yokuqala yonyaka wezi-2020. Lokho kusho ukuthi, izinga le-The European Central Bank (ECB) selinqume ukuthi ngoLwesine ligcine inzalo ingashintshi kuze kube yingxenye yokuqala 2020
Izimpikiswano zokutshala imali kwizimali zegolide
Umkhawulo phakathi kokuphakelwa kanye nokufunwa ubucinene kakhulu kusukela ngo-1996. Ngisho nango-1996, 1997, 2000 kanye no-2001, ukuthengiselana bekunganele futhi kube khona noma ikuphi, igolide lingenye yezindlela zokufuna isiphephelo kuzimo zokungazinzi izimakethe zokulingana
Yini okufanele uyenze uma i-Ibex 35 iya kumaphoyinti angama-8.500 XNUMX?
Sisesontweni eliyisihluthulelo sezimakethe zamasheya emhlabeni wonke, kepha ikakhulukazi kwabaseSpain, okungaholela ekuthambekeni okucacile okwehlayo okungenani uma nje i-Ibex 35 ingabuyisi ileveli yamaphoyinti angu-9.500 okuwumugqa ohlukanisayo manje phakathi komfula nomfula.
Izinzuzo zokutshalwa kwemali kwidijithali
Esinye seziphetho ezafinyelelwa yi-XNUMXst Popcoin Investment Barometer embikweni wayo wakamuva ngukuthi abasindisi abayisithupha kwabayishumi baseSpain Okokuqala kusho ukuthi umphumela wokuqala wokusetshenziswa kotshalo-mali lwedijithali noma lwe-Intanethi ukuthi ngokungangabazeki usiza ukunciphisa izindleko
Ukutshalwa kwezimali kumabhondi aluhlaza we-ADIF
Ukutshala imali kumabhondi aluhlaza kungaba yindlela ethakazelisa kakhulu yokutshala imali futhi ngomunye wemikhiqizo ethandwa kakhulu Ukutshalwa kwemali kumabhondi aluhlaza kungaba yindlela ethakazelisa kakhulu yokutshala imali futhi ngomunye wemikhiqizo ebaluleke kakhulu. Engaziwa ngabatshalizimali abancane naphakathi.
I-Siemens Gamesa: iyingozi lapho kuwela imakethe yamasheya
Elinye lamagugu alandelwa kakhulu ngabatshalizimali abancane nabaphakathi ngokungangabazeki yi-Nokia Gamesa. Kuyinto ekhethekile, okuyiyona eyengeziwe Enye yezindinganiso ezilandelwa kakhulu ngabatshalizimali abancane nabaphakathi ngokungangabazeki yi-Nokia Gamesa futhi ikakhulukazi, okuyiyona ethanda kakhulu ukwenza imisebenzi yokuqagela.
I-Atresmedia neMediaset, enezabelo ze-10%
Izinkampani zemidiya eziningi zokuxhumana kuzwelonke, i-Atresmedia neMediaset, yizo manje ezisabalalisa isabelo semali esivuleke kunazo zonke Izinkampani zemidiya eziningi zokuxhumana kuzwelonke, i-Atresmedia neMediaset, yilezo okwamanje ezisabalalisa isabelo esiphakeme kunawo wonke semali yaseSpain.
Izindlela ezi-6 zokutshala imali kuleli hlobo
Ihlobo akusona isikhathi esihle sokutshala imali. Umthamo wenkontileka uwela kakhulu ngokuqhathaniswa nezinye izinkathi zonyaka. Kuze kube sekupheleni kwehlobo akusisona isikhathi esihle sokutshala imali, lapho umthamo wezinkontileka wehla kakhulu ngokuqhathaniswa nezinye izinkathi zonyaka
Yini okufanele uyenze ngokulondolozwa kwethu kuleli hlobo?
Ihlobo lifika unyaka owodwa futhi nesikhathi esithile esenzelwe ukuphumula nokuphumula. Akusona isikhathi esihle kakhulu kubo. Ihlobo lifika unyaka owodwa futhi libe nesikhathi esenzelwe ukuphumula nokuzilibazisa. Akusona isikhathi esivumayo kakhulu sokutshalwa kwezimali ezimakethe zezimali.
Imikhiqizo namasu okutshalwa kwezimali
Omunye wemikhiqizo emakethwa ngenani elikhulu lezokuphepha nezinkampani ezishintshanisa amasheya ngama-akhawunti esikhwama enzelwe Omunye wemikhiqizo isibalo esikhulu sezokuphepha nezimakethe zezimakethe zezimakethe ezingamasheya angama-akhawunti esikhwama enzelwe abatshalizimali abatshala imali ngokuyinhloko ezikhwameni ezihlanganyelwe futhi azidingi izingcaphuno zesikhathi sangempela
Imikhakha namagugu ahlomulile futhi alimala ngohulumeni omusha
Uhulumeni omusha iSpain ezoba nawo ezinyangeni ezizayo kufanele usize abatshalizimali abancane nabaphakathi ukwenza kahle lapho beklama isu labo Lenye yemikhakha ethinteke kakhulu bekungeke kube ngaphandle kukagesi, futhi kungabi yize, kufanele kukhunjulwe ukuthi lokhu izinhlobo zezinkampani zivame ukuhola ukusikeka ngemuva kokhetho
Amathuba amabhizinisi ama-6 emakethe yamasheya aseSpain
Ngaphandle kokungaqiniseki okuphezulu ezimakethe zezimali zaseSpain, akungabazeki ukuthi amathuba ebhizinisi ahlala engashintshi kulezi zimakethe.Naphezu kokungaqiniseki okuphezulu ezimakethe zezimali zaseSpain, akungabazeki ukuthi amathuba amabhizinisi asekhona okwamanje
Kuthinta kanjani ukuthi inzalo ingakhuphuki?
Isinqumo se-European Central Bank (ECB) sokubambezela ukukhuphuka kwamanani wenzalo endaweni ye-euro sinomthelela ohlukile Esinqumweni se-European Central Bank (ECB) sokubambezela ukukhuphuka kwamanani wenzalo endaweni ye-euro umthelela ohlukile kuye ngomkhakha okukhulunywa ngawo
I-veto yakwaGoogle yeHuawei iyawa amasheya ezobuchwepheshe
Imiphumela yesinqumo esithathwe yiGoogle ukwephula ubudlelwane bayo nomkhiqizo waseChina uHuawei kudale ukukhathazeka okukhulu ngemiphumela yesinqumo esithathwe yiGoogle ukwephula ubudlelwane bayo nomkhiqizo waseChina iHuawei kudale ukukhathazeka okukhulu kwabancane nabaphakathi abatshalizimali
6 amasu okutshala imali ukuze athuthukise kuleli hlobo
Leli hlobo lingaba ngelokugcina ngamanani wenzalo aphansi endaweni ye-euro, ngokusho kwe-European Central Bank (ECB). Onke amehlo Nokho, kuleli hlobo ungasebenzisa uchungechunge lwamasu okutshala imali angahle athande izintshisekelo zakho kulezi zinyanga ezikhethekile
Umkhakha wezokuvakasha: ukubhekwa ehlobo
Lapho cishe sicwiliswa ezinyangeni ezishisayo zasehlobo, izindinganiso zomkhakha wezokuvakasha ezinye zeziphakamiso okufanele sizinakekele Lapho cishe sicwiliswa ezinyangeni ezishisayo zasehlobo, amanani omkhakha wezokuvakasha ezinye zeziphakamiso cabanga ngokwenza imali enenzuzo ngalesi sikhathi sonyaka
Imali exhunywe ku-Eurostoxx 50
Elinye lamaqhinga atholakalayo kubatshalizimali abancane nabaphakathi ukwenza imali abayongayo ibe nenzuzo ngaphandle kokuthatha izingozi njengokuxhuma imali Enye yezindlela ezingatholwa abatshalizimali abancane nabaphakathi ukwenza ukonga kwabo kube nenzuzo ngaphandle kokucabanga izingozi ukuxhumanisa imali yasebhange yesikhathi esinqunyiwe inkomba ekhethiwe yezimali zaseYurophu, i-Eurostoxx 50
Ngabe ucabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuqasha uhlelo lwempesheni?
Ngo-Ephreli, iningi lama-indices emakethe yamasheya amakhulu avale inyanga ngokubuyekezwa, avumela izinhlelo zempesheni eziphakeme Ngo-Ephreli, iningi lama-indices emakethe yamasheya avale inyanga ngokubuyekezwa, avumela izinhlelo zempesheni ngokuvezwa okukhulu kwamasheya zithola inzuzo enhle
Izabelo ze-Ibex 35 ne-Ibex 35 Inverso: amanye ama-indices emakethe yamasheya
Izabelo ze-Ibex 35 ne-Ibex 35 Inverso ngezinye zezinkomba zamasheya ezingaziwa lapho abatshalizimali abancane nabaphakathi bengatshala khona I-Ibex 35 Izabelo kanye ne-Ibex 35 Inverso kungezinye zezikhombo ezingaziwa kakhulu lapho abatshalizimali abancane nabaphakathi bengatshala imali abayongile
Umkhakha kagesi usebenza njengesiphephelo ekuweni kwemakethe yamasheya
Umkhakha kagesi kuphela osalokhu untanta kusukela ekuweni kwezinkomba zamasheya aseSpain, i-Ibex 35. Ukuthi esikhathini esifushane kuphela umkhakha kagesi kuphela oqhubeke nokusebenza njengesiphephelo ekuweni kwezinhlu zezinkampani zaseSpain, Ibex 35 nokuthi esikhathini esingaphezu nje kwesonto isuke kumaphoyinti angama-9.500 yaya kuma-9.000 amaphuzu
Imikhiqizo emihle kakhulu ongayitshala kumali engenayo engaguquguquki neguqukayo
Impela esinye sezifiso zakho eziseduze kakhulu ekutshaleni imali ukuthenga amasheya emalini. Kepha kufanele wazi ukuthi awudingi.Ngamanje uneminye imikhiqizo yokulingana ekuvumela ukuthi wonge imali ngokunenzuzo, yize ezimweni eziningi kungaphansi kwezinhlobo zokutshala imali ezinolaka kakhulu.
Amathiphu amahle kakhulu wokuthenga ngempumelelo emakethe yamasheya
Impela esinye sezifiso zakho eziseduze kakhulu ekutshalweni kwemali ukuthenga amasheya kuma-equities ngeziqinisekiso ezithile zempumelelo. Yebo, ngokuqinisekile esinye sezifiso zakho eziseduze kakhulu ekutshalweni kwemali ukuthenga amasheya kuma-equities ngeziqinisekiso ezithile zempumelelo.
Amathiphu Okunciphisa Ubungozi Ekuhwebeni Kwangaphambili
Imakethe ye-Forex, okushintshaniswa ngayo izimali, ikhiqiza inqwaba yamathuba okuhweba, ngoba yinye ...
Izinkanyezi ezintsha zezimakethe ezisafufusa
Izimakethe ezisafufusa yilawo mazwe noma umnotho osesigabeni soguquko phakathi kwamazwe asathuthuka namazwe Izimakethe ezisakhulayo kulawo mazwe noma umnotho osesigabeni soguquko phakathi kwamazwe asathuthuka kanye namazwe athuthukile
Izinkampani ezine ezinesabelo esihle kunazo zonke ku-Ibex 35
Ngokuya ngemininingwane enikezwe yiReuters, i-IAG, i-Endesa, i-Enagás ne-Repsol yizabelo ezinesivuno esikhulu kunazo zonke kulawa masheya Ngokwedatha enikezwe yiReuters, IAG, Endesa, Enagás kanye neRepsol amasheya anenzuzo ephezulu kakhulu ngokwabiwe njengamanje inikezwa enkombeni ekhethiwe yezimali zaseSpain, i-Ibex 35
Ibex 35 phakathi kwamazinga amaphuzu angu-9.200 no-9.600
Sekuyisikhathi eside kusukela inkomba ekhethiwe yezimali zaseSpain, i-Ibex 35, ingahambanga ngemuva kwesikhathi. Ebangeni elihamba phakathi Isikhathi eside inkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35, ayizange ihambisane nokuhamba kwesikhathi okunjalo. Emgqeni ohamba phakathi kwamaphoyinti angama-9.200 kanye no-9.600 lawo amaka umkhuba ohlangothini olulodwa noma kolunye
I-Vibex: inkomba yokuguquguquka emakethe yamasheya yaseSpain
Impela awukaze uzwe ngeVibex emhlabeni wokutshala imali? Yebo, kuyinkomba enganikeza umkhondo ongajwayelekile wokuvula i-Vibex ngaleyo ndlela ayifaki ukuphepha noma izinkampani ezifakwe kuhlu futhi ngandlela-thile inkomba yokwesaba efana ne-VIX e-United States futhi esetshenziselwa ukwazi isimo sangempela zezimakethe
Impi yezohwebo phakathi kweChina ne-United States iyaqina
Ukuhwebelana kwamasheya emhlabeni wonke kuphila osukwini olunzima ngenxa yesigaba esisha esinaso ...
Ama-indices emakethe yamasheya aseSpain: ukutshala imali
Izimali zaseSpain azigcini kuphela ku-Ibex 35, njengoba abanye abatshalizimali abancane nabaphakathi bengase bacabange okwamanje. Kukhona abanye Kunamanye ama-indices angaziwa angaba yinto yokusebenza kwethu kusukela manje, futhi amanye awo asebenza kakhulu, yize amanye engaziwa kakhulu yingxenye enhle yabasindisi
Imali engenile noma imali eguquguqukayo?
Ukukhetha phakathi kwemikhiqizo kusuka kumholo ohleliwe noma emalini kungenye yezinqumo ezivela ekutshalweni kobuso bakho.Ukukhetha phakathi kwemikhiqizo kusuka emholweni ongaguquguquki noma emalini kungenye yezinqumo ezibhekela utshalomali lwabo engxenyeni yesibili
Izici ezingadala ukuphahlazeka kwemakethe yesitoko
Ukuphahlazeka emakethe yamasheya yisimo esifihlekile ezingqondweni zabatshalizimali abaningi abancane nabaphakathi. Akunakulibaleka ukuthi kwezinye izimo, ukuwa emakethe yamasheya kuyisimo empeleni esifihliwe ezingqondweni zabatshalizimali abaningi abancane nabaphakathi.
Ukutshalwa kwezimali kumabhondi azinzile kahulumeni waseBasque
I-BME, ngokusebenzisa iBilbao Stock Exchange, iyavuma ukuhweba kusasa udaba olusha lwamabhondi azinzile olwethulwe Uhulumeni waseBasque ngenani leBME, ngeBilbao Stock Exchange, iyavuma ukuhweba kusasa udaba olusha lwamabhondi esimeme olwethulwe nguhulumeni waseBasque ngenani lama-euro ayizigidi ezingama-600
Imibuzo engu-6 abatshalizimali abangazibuza yona
Abatshalizimali bavame ukuzibuza imibuzo eminingi engaphendulwa ngezizathu eziningi. Kule ndatshana sizobuza kaningi imibuzo abaningi abatshalizimali abangazibuza yona futhi okungenzeka ukuthi ayinayo impendulo ngezizathu eziningi nokuthi kule ndatshana sizobonisa ezinye zezikhalazo esingazigcina esikhathini esingaphezu kwesisodwa
Ukhetho olujwayelekile eSpain: ukusabela kwemakethe
Okungenani kokungabaza ukuthi abatshalizimali abancane nabaphakathi eSpain bafakwe kususiwe, okuxhumene nokhetho jikelele olwenzekile Okungenani kokungabaza ukuthi abatshalizimali abancane nabaphakathi eSpain bakubambile, okuhlobene ukhetho jikelele olwenzeke kuleli Sonto eledlule
Iningi lezinsizakalo ezimele ezihlotshaniswa ne-akhawunti yokukhokha
Ama-akhawunti wokukhokha angumkhiqizo wasebhange lapho izindleko eziningi zingaqoshwa ngabanikazi bazo. Kubalulekile futhi ukusebenzisana nama-akhawunti wezinkokhelo kungumkhiqizo wasebhange lapho izindleko eziningi zingaqoshwa ngabanikazi bazo futhi kubalulekile ukusebenzisana neminye imikhiqizo yezezimali
Ukuhlukahluka: amabhange vs kagesi
Kuyivelakancane ukuthi kube khona ukwehluka okuphezulu kangaka phakathi kwezindinganiso zemikhakha yasebhange neyegesi. Lapho zithathwa khona ngokuphelele Kusezikhathini ezibanzi kakhulu zomnotho lapho amanani ahambelana namabhange angahle asebenze kangcono
Izindlela zokubhekana nokutshalwa kwezimali ngaphambi kokufika kwehlobo
Ihlobo impela liyinkathi eyinkimbinkimbi yezimakethe zezimali zokulingana ngezizathu ezahlukahlukene esizozichaza ngezansi. Ihlobo impela liyinkathi eyinkimbinkimbi yezimakethe zezimali zokulingana ngezizathu ezahlukahlukene esizozichaza ngezansi.
6 okhiye ekuthuthukiseni utshalomali
Enye yezinhloso zanoma yimuphi umtshalizimali omncane naphakathi kufanele kube ukuvikela izikhundla zabo ezimakethe zamasheya ngenhla Enye yezinhloso zanoma yimuphi umtshali-zimali omncane naphakathi kufanele kube ukuvikela izikhundla zabo ezimakethe zezimali ezifana nenye yezikhiye zokufeza it
Amanani kagesi: ukuguqulwa kwesimo noma ukulungiswa?
Lezi akuzona izikhathi ezinhle zamanani omkhakha kagesi. Emasontweni adlule, ngenkathi izimakethe zezimali zibhekane nezinye Kunesici esilimaza kakhulu amanani kagesi asikho okunye ukungabaza okwenziwa kwezepolitiki zaseSpain ngenxa yenqubo yokhetho
Imikhakha okufanele igwenywe emakethe yamasheya kulo nyaka
Yize izimali zisebenza kahle kakhulu, okubaluleke kangako ukuthi ukulungiswa kwekota yesibili yonyaka Uma kwenzeka ukulahleka kwamanani ezimakethe zamasheya, akungabazeki ukuthi kunemikhakha ethile engahle isebenze kabi kunalokho kuwo wonke amanye amanani
Izimalimboleko ezi-Fixed-rate zehlisa amanani azo wenzalo ngo-2019
Imakethe yemalimboleko ikhombisa ukwehluka okuncane ngokuqala kwentsha, lapho imali ebanjwayo yemali engaguquki ingcono kakhulu Idatha yakamuva esemthethweni ikhombisa ukuthi emabhange abanjelwe enanini lezakhiwo, inzalo emaphakathi ekuqaleni ingu-2,61%
Ukutshalwa kwemali kuzoba njani ngo-2019?
UMnyango Wokuhlaziywa Kwenzuzo 4 I-Banco yethule Isu Layo Lokutshalwa Kwezimali lowe-2019, elimakwe ngokuthi "ukwehla kancane komjikelezo wezomnotho Asikwazi ukukhohlwa ngalesi sikhathi ukuthi yisimo ngaphambi kokunyuka kwezinga endaweni ye-euro, kuzobaluleke kakhulu ikusasa lanoma iluphi uhlobo lotshalo-mali
Ukutshala imali: yini okufanele uyenze uma imakethe yamasheya yehla?
Ukulungiselela ukuqeda isemester yokuqala yonyaka yisikhathi esihle sokubheka ukuthi kuzokwenzekani uma kusuka manje kuya phambili ekutshalweni kwemali engenayo Ukulungela ukuqeda isemester yokuqala yonyaka yisikhathi esihle sokubheka ukuthi kuzokwenzekani uma kusuka kulo mzuzu Ukutshalwa kwezimali kumasheya njengamanje kusenkingeni enkulu
Ukhetho luzoyithinta kanjani imakethe yamasheya aseSpain?
Ngomhla ka-28, abaseSpain banokuqokwa nezindawo zokuvota. Kodwa abatshalizimali nabo banesifiso esikhulu sokwazi ukuthi izimakethe zizosabela kanjani.Iminye imikhakha yamasheya ibucayi kunezinye maqondana nesigungu esiphezulu esingahle sakhiwe ngemuva kokhetho lukazwelonke kule nyanga.
Yini okufanele uyenze ngokulondolozwa kwethu ngePhasika?
Kuza isikhathi sonyaka, njengePhasika, lapho ukuphepha kokulondolozwa kufanele kube namandla ngaphezu kokunye ukucatshangelwa. Ngalo mqondo, kufika isikhathi sonyaka, njengeViki Elingcwele, lapho ukuphepha kokonga kufanele kube namandla ngaphezu kokunye ukucatshangelwa
I-ECB ithathe isinqumo sokungangeneleli yize kunciphile
Konke kuhlala kufana kunqubomgomo yemali endaweni ye-euro, ngemuva komhlangano wakamuva owenziwe yi-European Central Bank (ECB). Emjikelezweni wayo yonke into uhlala ufana kunqubomgomo yezimali endaweni ye-euro, ngemuva komhlangano wakamuva owenziwe yi-European Central Bank (ECB). Esithangamini nabezindaba, umengameli wayo, uMario Draghi, uphawule wathi umhlangano womkhandlu "awusebenzi"
IBanco Sabadell ngesikhathi esibucayi: ithengisa ngaphansi kwe-euro
Uma kukhona ukuphepha okubalwe emakethe yamasheya okugcina isimo sobuchwepheshe esonakala kakhulu, lokho ngokungangabazeki yiBanco Sabadell. Inani layo linikiwe.Uma kukhona ukuphepha okubalwe emakethe yamasheya okugcina kunesici sobuchwepheshe esiwohloke kakhulu, lokho ngokungangabazeki iBanco Sabadell
Ikota yesibili yonyaka ingaletha isimanga esingajwayelekile maqondana nokuphepha kwe-Ibex 35 okufanele kwenziwe iphothifoliyo yethu yokutshala imali Ikota yesibili yonyaka ingaletha isimanga esiningi maqondana nezokuphepha ze-Ibex 35 okufanele zenze iphothifoliyo yethu yokutshala izimali ebusweni, okungenani ekupheleni konyaka
Muva nje, bobabili i-European Commission kanye ne-European Central Bank kanye neBhange laseSpain bebelokhu bexwayisa ngobungozi obutholakala Esikhathini samanje sokunikezwa kwemali mboleko yomuntu siqu, kukhona okukodwa okudinga izici zayo ezikhethekile okuthiwa ukutshalwa kwezimali izikweletu
Akungabazeki ukuthi umsebenzi wokuthenga amasheya ezimakethe zamasheya udinga umzamo omncane ohlangothini lwezinkampani ezincane neziphakathi nendawo Akungabazeki ukuthi umsebenzi wokuthenga amasheya ezimakethe zamasheya udinga umzamo omncane wokuyingxenye yezincane kanye nabatshalizimali abaphakathi nochungechunge lwedatha
I-Amadeus: ixhumene kakhulu nezokuvakasha
Mhlawumbe elinye lamasu okutshalwa kwezimali asebenza kahle kakhulu lisungulwa ngemikhakha ekhule kakhulu emisebenzini yezomnotho.Ngakolunye uhlangothi, ngeke kulibaleke ukuthi i-Amadeus ingesinye sezibambiso zamasheya aseSpain ezinesici sobuchwepheshe esingcono kakhulu kulezi zikhathi eziqondile
Izimakethe zamasheya ezinhlanu ezithakazelisa kakhulu ongatshala kuzo
Okwamanje, inkomba ekhethiwe yezimali zaseSpain, i-Ibex 35, isivele inamaphuzu angama-9600. Ngandlela thile, kubonakala sengathi kunezimakethe eziningi ezimakethe zomhlaba ezingaba nenzuzo enkulu ukuvula izikhundla kulezi zimpahla zezimali.
I-Naturgy: njengenye indlela yokutshala imali ngo-2019
I-Naturgy ingenye yezokuphepha ezenza okusemandleni enkombeni ekhethiwe yezimali zaseSpain. Kokubili kuze kube manje kulo nyaka nakuNaturgy kungenye yezokuphepha ezenza okusemandleni enkombeni ekhethiwe yamasheya aseSpain, kuze kube manje kulo nyaka nangonyaka odlule
Ingabe yisikhathi esihle sokungena e-Bankia?
Abatshalizimali bangakhetha kumabhange anhlobonhlobo ukwenza ukonga kwabo kube nenzuzo kulo nyaka onzima ezimakethe ezingenayo I-Bankia ithole inzuzo ebabazekayo yama-euro ayizigidi ezingama-703 ngo-2018, okusho ukwanda kwama-39,2% uma kuqhathaniswa no-2017
Izitoko ezi-5 zaseSpain zokubhekana nokwehla komnotho
I-European Central Bank (ECB) isanda kubuyekeza izibikezelo zayo zezomnotho emazweni ase-euro eminyakeni embalwa ezayo. Likuphi leli su lokulwa nokwehla komnotho kuzothuthukiswa ngokuqapha okukhulu kumasheya akhethiwe
Yini okufanele uyenze uma wenze iphutha emakethe yamasheya? Ezinye izixazululo
Enye yezinkinga ezibandakanywa yimakethe yamasheya ukuthi wenza iphutha lapho uthenga ngentengo yemakethe. Lokho wukuthi, ukuze ukwazi ukulungisa lezi zinkinga ngokutshala izimali ezimakethe zezimali, sizophakamisa uchungechunge lwezixazululo zokuzama ukunciphisa lesi simo esingavela ngamaza athile ekusebenzeni kwakho emakethe yamasheya.
Imikhiqizo ezotshalwa kumasheya
Imakethe yamasheya yaseSpain ithengise ama-euro ayizigidi ezingama-41.407 ngoJanuwari, i-6,8% ngaphezulu kwenyanga eyedlule nenyanga ehamba phambili kusukela ngo-Okthoba, yize i-18,6% ingaphansi kwesisodwa sezibonelo ezifanele kakhulu ikusasa kuma-indices emakethe yamasheya futhi emele enye indlela wokuqonda ukutshala imali ezimakethe zezimali
I-Ibex 35 Dividend, inkomba engaziwa kakhulu eSpain
Akungabazeki ukuthi eSpain kuneminye imithombo yokubhekisela ngale kwenkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35. Ngokuqondile, ama-Dividend e-Ibex 35 iyinkomba ewusizo kakhulu kubatshalizimali abafaka ukwehluka kwamanani amanani
Ukuqapha amanani wemakethe yamasheya
Abatshalizimali bangakhetha kusuka kuziteshi ezahlukahlukene zolwazi ukuthola isimo samanje sokutshala kwabo imali. Njalo okusekelwe kubatshalizimali bangakhetha kusuka kuziteshi ezahlukahlukene zolwazi ukuqapha kahle amanani asemakethe yamasheya
/ Ungazungezisa kanjani izikhundla kwiphothifoliyo yokutshala imali?
Esinye sezihluthulelo ezisebenza kahle kakhulu ekutshalweni kwezimali sihlala eqinisweni lokwenza ukuzungeza okulungile kumanani enza utshalomali lwethu Enye yezikhiye zokwenza ngcono ukutshalwa kwezimali ihlala ekwenzeni ukuzungeza okulungile kumanani enza Iphothifoliyo yokutshalwa kwezimali
Ukuphepha Okuhweba Ngezansi Kwe-Euro Okuyingozi Kakhulu
Ekuqaleni, qaphela amasheya athengisa ngaphansi kwe-euro eyodwa. Phakathi kwezinye izizathu ngoba uma kufinyelelwe ekuqaleni, umuntu kufanele aqaphele amanani esitokwe ahweba ngaphansi kweyunithi elilodwa le-euro, futhi phakathi kwezinye izizathu ngoba uma lesi simo sesifikile, kuyinkimbinkimbi kakhulu ukuya emphakathini.ngenhla kwe-euro.
Ungakwenza kanjani ukuthenga esikhwameni?
Ukungena kahle ezimakethe kungenye yezinhloso zanoma yimuphi umtshalizimali futhi kulokhu kufanele uhlele isu elihlelwe kahle kakhulu.Ukufaka izimakethe kahle ngokuthenga kungenye yezinhloso zanoma yimuphi umtshalizimali futhi kulokhu kufanele uhlele isu elihlelwe kahle
Okuvelayo: umkhakha we-Intanethi emakethe yamasheya
I-Internet Yurophu iyinkomba eqoqa amakhotheshini ezinkampani ezibaluleke kakhulu kulo mkhakha wezobuchwepheshe ezwenikazi elidala futhi, lapho i-Internet Europe iyinkomba eqoqa amakhotheshini ezinkampani ezibaluleke kakhulu zale mboni yezobuchwepheshe ezwenikazi elidala futhi, okubandakanya kusuka ezinkampanini ezihlanganisiwe ziye kwabanye ngenkathi kunwetshwa
Izimpawu ezizokhombisa ukwehla emakethe yamasheya
Okunye ukwesaba ohlangothini lwabatshalizimali abancane nabaphakathi okwamanje ukuthi izimakethe zamasheya zingangena ngokusobala Okukwesabisayo okukhona kubatshalizimali abancane nabaphakathi okwamanje ukuthi izimakethe zamasheya zingangena ehlweni elicacile
Yini imikhiqizo ehlelekile?
Izimali zokutshala imali zingenye yamathuluzi athandwayo kubatshali bezimali abaningi abancane nabaphakathi. Kepha ngendlela yayo yemikhiqizo ehlelekile, kuyisu eliphumelelayo impela lokunqoba ukusebenza okubuthakathaka okunikezwa yimikhiqizo yasebhange okwamanje.
Imikhakha yemakethe yamasheya yaseSpain
Ngaphambi kokuvula izikhundla ezimakethe zezimali kuzodingeka ngokuphelele ukuthi ucace ngemikhakha abaya kuyo Ngaphambi kokuvula izikhundla ezimakethe zezimali kuzobaluleke kakhulu ukuthi ucace ngemikhakha abazoyalela yona ukonga
Yini imali mboleko eku-inthanethi nokuthi uyisebenzisa nini?
Thola ukuthi yini imali mboleko eku-inthanethi, ukuthi yini okufanele uyifune ukuze ukhethe eyodwa futhi lapho kulula kuwe ukuthi ucele imali mboleko yalezi zici
Ibex 35 icishe ibe ngamaphuzu angama-9600, manje kwenzenjani?
Kubonakale kungacabangeki ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi ikakhulukazi ngasekupheleni kuka-2019. Kepha iqiniso ukuthi inkomba yokukhetha ekhethiwe ibibukeka ingacabangeki ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi ikakhulukazi ekupheleni konyaka ka-2019. Kepha iqiniso ukuthi inkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35, manje isifinyelele kumaphuzu angama-9600
Ngilahlekelwa yimali: yini engingayenza?
Ukuze lokho okwenzeke kuwe ngonyaka odlule kungaphindi kwenzeke, sizokunikeza izinkombandlela zokuziphatha ukuze wazi okufanele ukwenze Inkinga enkulu yokulahlekelwa yimali ezimakethe zezimali ukuthi izinto zingaba zimbi kakhulu futhi ulahlekelwe ekusebenzeni kwakho emakethe yamasheya
Ukhetho lwaseYurophu luzothinta imakethe yamasheya
Ukhetho lwePhalamende LaseYurophu lwango-2019 luhlelelwe ukuba lwenzeke kuwo wonke amazwe e-European Union ngeSonto, ngoMeyi 26, 2019. Ngosuku olulandelayo ngemuva kokhetho lwangoMeyi lwaseYurophu, izimakethe zezimali zezwekazi elidala zizokhipha isinqumo sazo, kuya ngokuthi Imiphumela
Sika ekulinganisweni kwezinkampani zensimbi
Ibhange lotshalo-zimali laseMelika i-JP Morgan lisanda kusika amanani ezinkampani zensimbi zase-Europe i-ArcelorMittal, Acerinox Ibhange lotshalo-zimali laseMelika i-JP Morgan lisanda kusika amanani ezinkampani zensimbi zase-Europe.
ICellnex ingahlawuliswa emakethe yamasheya ye-ERE yayo
I-Cellnex ngokungangabazeki ibe ngesinye sezimanga ezinhle ezinhle ezilinganisweni ezinyangeni ezedlule. Kusukela yaqala ukufakwa ohlwini ku-Cellnex, akungabazeki ukuthi kube ngesinye sezimanga ezinhle ezinhle ezilinganisweni ezinyangeni ezisanda kwedlula
Ziyini izingozi zokuhweba amapulatifomu okuhweba?
Enye yezinto ezintsha okungavelwanga ukuhwebelana kwembulunga yonke ekutshalweni kwemali ukuvela kokungapheli kwamapulatifomu ezezimali zedijithali engingawazi Kuma-platforms wokuhweba edijithali ongakutholi nakanjani yimikhiqizo obukade uyenza nesivumelwano nebhange lakho unomphela.
Imali ongayitshala emakethe yamasheya
Elinye lamasu okutshala imali emakethe yamasheya ngaphandle kokuziveza livela kumabhange wesikhathi esinqunyiwe axhunyaniswe nezimakethe Zelinye lamasu okutshala imali emakethe yamasheya ngaphandle kokuziveza livela kumabhange wesikhathi esinqunyelwe axhumene ne izimakethe zokulingana
Izinkampani zikagesi vs ukuphepha komkhakha wamabhange
Isinqumo se-European Central Bank (ECB) sokulibazisa ukukhuphuka kwamanani wenzalo endaweni ye-euro siveze ukwehluka Isinqumo esenziwe yi-European Central Bank (ECB) sokubambezela ukukhuphuka kwamanani wenzalo Endaweni ye-euro, sigqamisile ukwehluka kwentengo yezokuphepha zomkhakha wamabhange nezinkampani zikagesi
Ukubhejela ezemidlalo njengokutshalwa kwezimali
Isimo samanje ezimakethe zezimali, kokubili imali engaguquguquki neguquguqukayo, kuholela kubatshali zimali abancane nabaphakathi. Kunokuhlukahluka okuningi phakathi kokubheja kwezemidlalo kanye nokutshalwa kwemali ngomqondo ongokoqobo wegama futhi lokhu kuyisici okufanele usazise
Isikweletu somphakathi eSpain
Okunye ukwesaba ohlangothini lwabatshalizimali abancane nabaphakathi okwamanje ukuthi isikweletu somphakathi siphezulu kakhulu futhi singakucindezela ukuziphendukela kwemvelo Okunye ukwesaba ohlangothini lwabatshalizimali abancane nabaphakathi okwamanje ukuthi isikweletu somphakathi siphezulu kakhulu futhi ingalinganisa ukuvela kwezimakethe
Ukhetho lwaseSpain aluthinti imakethe yamasheya
Isimemezelo sokubanjwa kokhetho lukazwelonke ngo-Ephreli 28 asikuthinti ukulingana. Lesi yisici esinethonya lokhetho oluzayo alunalutho, okungenani okwamanje futhi sikhokhele okungase kwenzeke emasontweni andulela ukugujwa kwalo.
I-Ibex idlula amaphuzu ayi-9.300: iziphi imikhakha okufanele zingenwe?
Ekugcineni, inkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35, yehlise ukwesekwa okuqinile kobuchwepheshe ebikade inakho ezinyangeni ezimbalwa ekugcineni, inkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35, yehlise ukusekelwa okuqinile kobuchwepheshe ukuthi Benginezinyanga ezimbalwa nginamaphoyinti angama-9.300
I-Telecom Telefónica kazwelonke yinani okwamanje elidonsa inkomba ekhethiwe yamasheya kazwelonke, i-Ibex 35, ngemuva kokuningi I-telecom kazwelonke Telefónica yinani okwamanje elidonsa inkomba ekhethiwe yamasheya kazwelonke, i-Ibex 35, ngemuva kwezinyanga eziningi ukungaqiniseki noma ngisho nokulahlekelwa okuphawulekayo emananini ayo
Lesi sigaba semikhiqizo yokonga, imali yesikhathi eside, singafakwa enkontilekeni yesikhathi esiphakathi kweminyaka emi-3 nengu-6, lapho lesi sigaba semikhiqizo yokonga, amadiphozi wesikhathi eside, singenziwa inkontileka yesikhathi esiphezulu esiphakathi kuka-3 no Iminyaka eyi-6, lapho kungakhethwa khona imali enenzalo ekhulayo, ehlelekile noma exhunywe enkombeni yesitoko
Ukubuyiswa kwamasheya isu elenziwa yizinkampani ezibalulwe ezimakethe zezimali ngezikhathi ezithile. Kubonakele Ukuthengwa kabusha kwamasheya isu lokuthi izinkampani ezibalulwe ezimakethe zezimali zenze kaningi
Amathuba okutshala imali ngokulingana
Umbono ojwayelekile wabahlaziyi bezezimali ukuthi ukukhula komnotho kuzoqhubeka kulo nyaka, yize kunamandla amancane kunelinye lamathuba amahle kakhulu okutshala imali kulo nyaka, ngokubona kwengxenye enkulu yabahlaziyi bezezimali, kuncike maphakathi izinkampani -cap
Isekela futhi imelane ne-Ibex 35
Akekho noyedwa wabenzeli bezezimali ongabazayo ukuthi inkomba ekhethiwe yemali engenayo eguquguqukayo, i-Ibex 35, isesimweni esicacile sokuhamba kwesikhathi. Akekho noyedwa wabasebenzeli bezezimali ongabaza ukuthi inkomba ekhethiwe yemali engenayo eguquguqukayo, i-Ibex 35, isesimweni esicacile sokuhamba kwesikhathi
Ingabe yisikhathi sokutshala izimakethe ezikhulayo?
Kokubili ukulingana eYurophu nase-United States sekuzofinyelela amazinga abo aphakeme ngentengo yezibambiso zabo. Ngezimpawu ezithile Isixazululo esihle sokwenza ukonga kube nenzuzo kusukela manje simelwe yizimakethe zezimali zamazwe athile asafufusa
Ungaqinisekisa kanjani ukubuya kokungaphezulu kwe-3% kokonga?
Akungabazeki ukuthi isitatimende salesi sihloko singenye yezinhloso zengxenye enhle yabatshalizimali abancane nabaphakathi. Ngesikhathi, lapho Enye yezinhloso zengxenye enhle yabatshalizimali abancane nabaphakathi, ngesikhathi, lapho imikhiqizo ehlukile yemali engenayo ingadluli ku-1% ekubuyiselweni abakunikela kulondolozo.
Okhiye bokukhetha kahle inani
Ukukhethwa kwemakethe yamasheya kuncike ezimeni eziningi kusu okumele lichazwe ngaphambi kokuvula izikhundla ezimakethe.Kunochungechunge lokhiye bokutshala imali olungasiza abasebenzisi ukuhambisa kahle ukusebenza kwabo ezimakethe.
Amakhanda nemisila phakathi kwabakhi bemakethe yamasheya aseSpain
Izinkampani zokwakha ezibaluleke kakhulu eSpain, futhi eziyingxenye yenkomba ekhethiwe yezimali zaseSpain, i-Ibex 35, zibhalise ngesikhathi sezinkampani zokwakha ezibaluleke kakhulu eSpain, futhi eziyingxenye yenkomba ekhethiwe yezimali zaseSpain, i-Ibex 35 , babhalise ukunyuka kwenani labo lemakethe ezinyangeni eziyisithupha ezedlule
UBorja Prado ushiya i-Endesa futhi uvula ukungabaza okusha enkampanini
Ezinye zezindaba ezihehe ukunakekelwa kulezi zinsuku ezedlule ukushiya phansi isikhundla komholi ophezulu we-Endesa ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi esesikhundleni. Kokunye kwezindaba okuhehe ukunakwa ezinsukwini zakamuva ukushiya phansi isikhundla komholi ophezulu we-Endesa ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi esesikhundleni.
Ama-stock indices aseYurophu
Uma inhloso yabatshalizimali ukukhetha izimakethe zokulingana zaseYurophu, akungabazeki ukuthi ezinye izindlela zibanzi kakhulu. Kuma-stock stock aseYurophu kungenye indlela yokutshala imali ngaphandle kokushiya imingcele yezwekazi elidala
Ama-Patriotic bond: enye indlela yokutshala imali
Omunye wemikhiqizo engaziwa kakhulu ngabatshalizimali abancane nabaphakathi ngokungangabazeki okubizwa ngokuthi yizibopho zokushisekela izwe. Ukuze Lowo wemikhiqizo engaziwa kakhulu ngabatshalizimali abancane nabaphakathi ngokungangabazeki okubizwa ngokuthi yizibopho zokushisekela izwe
IBankia inqume ukuxhasa izinhlelo zayo zempesheni
Abasebenzisi okwamanje abathole ezinye zezinhlelo zempesheni neBankia basenhlanhleni. Phakathi kwezinye izizathu, ngoba kuze kube namuhla, ngaphezu kuka-20% wokuthengiswa kwezinhlelo zempesheni kwenziwa ngeziteshi zedijithali, amaphuzu ayisikhombisa ngaphezulu konyaka ngaphambi kwalesi silinganiso
Abasebenza ngogesi balungisa ukukhuphuka kwabo kwangaphambilini
Akungabazeki ukuthi izinkampani zikagesi kube yizo ebezihamba phambili ekulinganisweni kwemali yaseSpain ngonyaka odlule. Lapho lo mkhakha Akungabazeki ukuthi izinkampani zikagesi yizona ebezihamba phambili ekulinganisweni kwezimali zaseSpain ngonyaka odlule
Isekela futhi imelane nokuvula izikhundla ezimakethe zamasheya
Esinye sezici ezintsha kakhulu ukuvula noma ukuvala izikhundla ezimakethe zamasheya kwenziwa ngokusekelwa nangokumelana. Esinye sezici ezintsha kakhulu zokuvula noma ukuvala izikhundla ezimakethe zezimali senziwa ngezinsizakalo
Amapulatifomu edijithali ezezimali: ayini futhi asebenza kanjani?
Eminyakeni yakamuva, amapulatifomu ezezimali edijithali abe semfashini njengeziteshi zokuthuthukisa ukutshalwa kwezimali. Kepha akukhulunywa Ngeminyaka yamuva nje, amapulatifomu wezezimali edijithali abe semfashini njengeziteshi zokuthuthukisa ukutshalwa kwezimali
Izinkinobho ezinhlanu ezikhishwe kumthamo wenkontileka
Imakethe yamasheya yaseSpain ithengise ama-euro ayizigidi ezingama-41.407 ngoJanuwari, emele u-6,8% ngaphezulu kunangenyanga eyedlule nangenyanga ehamba phambili kusukela ngo-Okthoba, yize i-Ngoba uma ivolumu yokuhweba incane kakhulu kusho ukuthi ukubongwa noma ukuvuselelwa kwamanani isungulwe kabi
Ukuthumela imali ngezwi nangama 'chatbots'
Ukuvela kobuchwepheshe obusha kunikeza izixazululo ezahlukahlukene zokukhokha ngamakhasimende asebhange. Kusuka lapho bangafika khona Ukuchithwa kobuchwepheshe obusha kunikeza izixazululo ezahlukahlukene zokukhokhwa kwemali ngamakhasimende asebhange
Isimo sabatshalizimali: bazifaka kanjani engcupheni?
Akubona bonke abatshalizimali abancane nabaphakathi abazibeka engcupheni ngendlela efanayo. Lokhu kukhonjiswa ocwaningweni lwakamuva olubizwa nge-A report on the trend in the action of the small and medium investors, the accent is kuweka on the fact that the first of the groups
Ibex 35 kwinqubo yokwenza izinto kamuva: yini okufanele uyenze?
Akungabazeki ukuthi inkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35, isesimweni esilandelanayo lapho kunzima khona ukuphuma emakethe.Kungangabazeki ukuthi inkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35 , Kukumkhuba we-lateral ukuthi kunzima kubo ukuphuma ezinyangeni ezisanda kwedlula
Iyini ivolumu yokuqashwa?
Enye yezinto ezithonya kakhulu intengo yokuphepha kokulingana ivolumu yezinkontileka. Ngokwezinga lokuthi ingesinye sezici ezinomthelela omkhulu entengo yamasheya okulingana ivolumu yokuhweba kwezibambiso.
Ziyini izimakethe ze-USDC?
Esinye seziphakamiso ezintsha sokwenza ukonga kube nenzuzo senziwa ngomkhiqizo onjalo omusha futhi ngasikhathi sinye singaziwa yingxenye.Uma iklayenti selibeke uphawu lwezimakethe, lingadluliselwa kuzingxenyekazi zedijithali zezezimali ngesikhathi esifushane kakhulu
Imikhakha emihlanu ezobhekana nemakethe yamasheya ngonyaka we-2019
Enye yezikhiye zokwenza utshalomali lube nenzuzo kulo nyaka ukukhiqiza ukukhetha okuhle emkhakheni wezokuphepha. Kulesi Esinye sezihluthulelo sokwenza utshalomali lube nenzuzo kulo nyaka ukukhiqiza ukukhetha okuhle emikhakheni yezimali
Usuku lwazisa ngaphezu kwama-60%
Uma kunebhokisi lezimanga kwizibalo zaseSpain okungelona elinye ngaphandle kwenkampani yokusabalalisa iDía.Kulezi zinsuku lenza izindaba ngoba linokuthi Uma kukhona ibhokisi lezimanga kwizimali zaseSpain okungekho okunye ngaphandle kwenkampani yokusabalalisa iDía
Ukulawulwa komkhakha kuhlawulisa izinkampani zikagesi ezimakethe zamasheya
Omunye wemikhakha yemakethe yamasheya ongase usebenze kabi kakhulu kulo msebenzi esivele siwuqalile owogesi. Lapho Omunye wemikhakha yemakethe yamasheya ongathola ukusebenza okubi kakhulu kulo msebenzi esisanda kuwuqala ngokagesi
Ingxenye yokuqala yonyaka bullish emakethe yamasheya
Bambalwa abatshalizimali abangacabanga ukuthi isigamu sokuqala sonyaka sizoba namandla ezimakethe zamazwe zamazwe. Kepha iqiniso ukuthi bambalwa abatshalizimali abangacabanga ukuthi isigamu sokuqala sonyaka sizoba namandla ezimakethe zamazwe ngamazwe zokulingana
I-ECB izobeka ijubane ezimakethe zamasheya zase-Europe ngonyaka we-2019
Umkhandlu olawulayo we-European Central Bank (ECB) uthathe isinqumo sokugcina inzalo ingashintshi emihlanganweni yawo yokugcina. Umzimba uMkhandlu Ophethe we-European Central Bank (ECB) uthathe isinqumo sokugcina amazinga wenzalo engashintshi emihlanganweni yawo yokugcina.
Ezinye izindlela ezine zesikhwama
Kungaba umzuzu ocacile wokushintsha umkhiqizo wezezimali ukwenza ukulondolozwa kwethu kube nenzuzo. Ngezizathu ezahlukahlukene ezinye zingavela Kungenzeka kube yisikhathi esinqunyiwe sokushintsha umkhiqizo wezezimali ukwenza ukulondolozwa kwethu kube nenzuzo futhi sifune ezinye izindlela
Esinye sezihluthulelo sokwenza utshalomali oluhle sisebenza ngokuthengwa kwamasheya esitokwe asesimweni senkambiso Esinye sezihluthulelo zokwenza utshalomali oluhle sibonakala ngokuthengwa kwamasheya esitokisi asesimweni sesimo esiqhubekayo.
Ukuphepha okusha emakethe yamasheya yaseSpain
Mhlawumbe abatshalizimali abaningi abazi ukuthi ukuphepha okuthile kuvela ezimakethe zezimali ukuze bakwazi ukuqashwa. Kumayelana Mhlawumbe abatshalizimali abaningi abazi ukuthi ukuphepha okuthile kuvela ezimakethe zezimali ukuze bakwazi ukuqashwa
Amasheya ayisithupha ayingozi kakhulu emakethe yamasheya aseSpain
Uma sibheke phambili kulo nyaka esiwuqalile nje, umbono ofanayo wokuthi abahlaziyi abahlukahlukene bezezimali baqala ukuthi abatshalizimali kufanele babe ngaphezulu Ukwenza iphothifoliyo yabo yezokuphepha, kufanele bagweme iziphakamiso zemakethe yamasheya ezivela emalini eyingozi kakhulu yezezimali
Ibex 35 ngaphambi kwenselelo yamaphuzu angama-9800
Inyanga kaJanuwari ibe nenhle kakhulu kunkomba ekhethiwe yezimali zamazwe, i-Ibex 35, eqale kabusha isiteshi se-bullish okungenani ngesifushane. 35, eqale kabusha isiteshi se-bullish okungenani esikhathini esifushane
Ungayivula kanjani i-akhawunti yokuhlola phesheya? Igxathu emvakwe gxathu
Amanye ama-akhawunti eza ukunikeza amaklayenti abo isilinganiso senzalo esijwayelekile esingaphezu kuka-0,50%, okungukuthi, cishe iphuzu lephesenti ngaphezulu.
I-Endesa izokwehlisa isabelo sayo kusuka ku-2021
Abatshalizimali ababekwe ezimakethe zamasheya bazoba nomuzwa ongemnandi ngezindaba zokuthi inkampani kagesi i-Endesa izonciphisa i-Endesa izonciphisa izabelo zayo kusukela ngo-2021, futhi leli isu elicatshangwe kuHlelo Lokusebenza
Iya kuzabelo, yebo noma cha?
Izabelo emakethe yamasheya ziyingxenye yenzuzo yenkampani enquma ukuyabela bonke abaninimasheya benkampani. Kuyimali engenayo engaguquki Izabelo ezimakethe zamasheya ziyingxenye yenzuzo yenkampani enquma ukuyisabalalisa phakathi kwabo bonke abaninimasheya benkampani
I-Santander, isendleleni eya kuma-euro angama-5?
Enye yamagugu amakhulu wezimali zikazwelonke njengeBanco Santander isezimpambanweni zomgwaqo ekuvumelaneni kwamanani ayo. Akekho noyedwa wamagugu amakhulu wezimali zikazwelonke ezifana neBanco Santander osesiphambanweni ekuvumelaneni kwamanani entengo
Imikhiqizo eyingozi eyi-6 okufanele uyigweme ngo-2019
Uma unephrofayili elondolozayo, kuzoba ngcono ngo-2019 uma uqondisa utshalomali lwakho maqondana nezimpahla zezimali eziphephe kakhulu kunalezo ezifakwe ezimakethe. Esinye sezizathu ezifanele kakhulu zokuchaza lolu shintsho kumumo ezimakethe zezimali kufanele engcupheni yangempela yokwehla komnotho okusha
I-Técnicas Reunidas: ibuyile noma ishintshe kuthrendi?
Kungumqondo ojwayelekile engxenyeni enkulu yabahlaziyi bezezimali ukuthi kunezizathu ezanele zenkomba yemali ekhethiwe uTénicnicas Reunidas ikhombise ukukhuphuka kwansuku zonke ngaphezu kuka-3% ngesonto eledlule, ngemuva kokulungisa amanani ayo
Ubhalwe kanjani umthetho wokushintsha kwesimo sezulu emakethe yamasheya?
Enye yezinyathelo ezicatshangelwe ngomthetho wokuguquguquka kwesimo sezulu ukwenqatshelwa kokuthengiswa kukadizili, uphethiloli kanye nama-hybridi ku-Enye yezinyathelo ezicatshangwe ngomthetho wokuguquguquka kwesimo sezulu ukwenqatshelwa kokuthengiswa kukadizili, uphethiloli kanye ne-hybrid izimoto
I-European Stock Market namabhondi akhiqiza kakhulu ngo-2019
Ukwakha iphothifoliyo yokutshala imali ephephile futhi elinganiselayo kulo nyaka okhona, kuzofanele ukhethe kakhulu kunamanje. Izimakethe Izibopho zokukhiqiza okuphezulu zingenye yezintandokazi ukubhekana nalo nyaka onzima futhi ongaba namathemba amahle kakhulu
Akuyona imfihlo ukuthi kulo nyaka u-2019 uzoba nzima kakhulu kuzo zonke izimakethe zezezimali, kokubili ukulingana nemali engenayo engaguquki. Le yindlela abakhonjiswa ngayo Akuyona imfihlo ukuthi kulo nyaka u-2019 uzoba nzima kakhulu kuzo zonke izimakethe zezezimali, zombili ezemali kanye nemali engenayo engaguquki.
Ngabe sizobona iTelefonica kulo nyaka ngaphezu kwama-euro ayishumi?
Uma kunenani eliyisikhungo semikhawulo engaphambili yabatshalizimali abancane nabaphakathi, leyo ngokungangabazeki i-telecom Telefónica. Uma kunenani eliyisikhungo semikhawulo engaphambili yabatshalizimali abancane nabaphakathi nendawo, lokho akungabazeki ukuthi yi-teleco Telefónica
I-FED ibeka inkambo yezimakethe zamasheya
Ikusasa lezimakethe zezimali zamazwe omhlaba liphawulwe ngezitatimende zomholi ophezulu weFederal Reserve of the Ikusasa lezimakethe zezimali zamazwe omhlaba liphawulwe ngezitatimende zomholi ophezulu we-FED ngokuthi kuzoba kanjani ukuguquka zezinhlobo
Izibalo zamashadi: ungathengisa kanjani emakethe yamasheya?
Elinye lamasu okusebenza ezimakethe zezimali lenziwa ngezimpawu ezibizwa ngeshadi. Bangakunika elinye lamaqhinga okusebenza ezimakethe zamasheya lenziwa ngezimpawu ezibizwa ngeshadi
Ungakwenza kanjani lapho uvalo lwemakethe yamasheya?
Isimo sezimakethe zamasheya zamazwe omhlaba singaphezu kwengozi yezintshisekelo zabatshalizimali abancane nabaphakathi. Lapho ukungazinzi kungenye yezimo ezimbi kakhulu ezingenzeka emakethe yamasheya: ukwethuka emakethe yamasheya futhi okungonakalisa izimali
Umshuwalense umkhakha onhlobonhlobo kangangokuba unezixazululo zomsebenzi ngamunye ovelayo empilweni. Kusuka kuzinqubomgomo eziningi Umshwalense umkhakha onhlobonhlobo kangangokuba unezixazululo zomsebenzi ngamunye ovelayo empilweni
Amanani amasha nokwehla kwiMadrid Stock Exchange
Njengayo yonke iminyaka emisha eqala, iphatha uchungechunge lwezindaba maqondana nezimpawu eziyinhloko zemakethe yamasheya yamasheya aseSpain. Ngalo nyaka wamanje, izimali zaseSpain zizokwakhiwa ngamasheya ayi-127 esamba samasheya eMadrid
Yiziphi izindinganiso zokuzivikela zokutshala imali emakethe yamasheya?
Zonke izimpawu zenkambo entsha yemakethe yamasheya ka-2019 azikhuthazi neze futhi zikhombisa okungenani ukuthi ukungazinzi kuzobakhona kuLunye lwezinyathelo bonke abatshalizimali okufanele bazingenise ukuze babheke kakhulu ukuphepha okubizwa ngokuthi kuyazivikela noma kuyindlela yokulondoloza
Imikhakha emihlanu yamasheya engenza kangcono ku-2019
Konke kubonakala kukhombisa ukuthi lo nyaka awuzukuvuna kakhulu izimakethe zezimali, ikakhulukazi emikhakheni ethile yamasheya ekhombisa ukuthambekela.Yonke into ibonakala ikhombisa ukuthi lo nyaka ngeke uvune kakhulu izimakethe zezimali, ikakhulukazi ezimakethe ezithile zamasheya
Izinto ezi-6 ezizonquma imakethe yamasheya ngo-2019
Umfutho omusha wokubhekana nonyaka omusha ungesinye sezifiso ukuthi abantu abancane nabaphakathi balindele ukuthola u-2019, yize kuzoncika ezintweni eziningi. Kulo nyaka kuzoba nezici ezithile ezinganquma umkhombandlela ongathathwa izimakethe zezimali kusukela manje.
Izipho ezi-7 ezinhle kakhulu izazi ezingaletha kuzo kubatshalizimali
Unyaka owodwa futhi, i-SSMM, aBantu Abahlakaniphile abathathu nabo bazovakashela abatshalizimali abancane nabaphakathi ngoJanuwari 6. Kulo nyaka, kunanini ngaphambili, izimfuno zabo zizokwanda.Umnyaka owodwa, iSilo Samadoda ahlakaniphile amathathu nawo azovakashela abatshalimali abancane nabaphakathi ngezipho ngoJanuwari 6
INkkei Index yaseJapan iphula zonke izisekelo
Imakethe yamasheya eJapan yathumela isignali esicacile kubatshalizimali baseNtshonalanga ngoKhisimusi futhi ngokuqinisekile yayingenathemba nakancane. Ngenye yezimakethe zamasheya eJapan yathumela isiginali ecacile kubatshali bezimali baseNtshonalanga ngoKhisimusi futhi empeleni yayingenathemba nhlobo
Ukuphahlazeka kwemakethe yamasheya ekupheleni konyaka
Ukucaphuna ngamanani amanje, kuyinto ejwayelekile kubatshalizimali abancane nabaphakathi ukuthi bazibuze ukuthi akusiso yini isikhathi sokungena ezimakethe zengeniso Ukwehla kwama-stock indices amakhulu sekuyinto yangempela ezinsukwini zokugcina zonyaka kanye nengcindezi yokuthengisa intela
I-United States Federal Reserve (Fed) inyuse amazinga wenzalo ngekota yesilinganiso ibanga eliphakathi kuka-2,25% no-2,5%, ngaleyo ndlela iqinisekisa ukubaluleka kwalokhu kusabela okuvela ezimakethe zezimali. umhlaba wonke
Kule mpelasonto, i-raffle yendabuko kaKhisimusi izosabalalisa isamba sama-euro ayizigidi ezingama-2.380, okuzoba ngawina kuphela abawinile Uma ungomunye wabaphumelele nge-Christmas Gordo ekudala ilindelwe uzokhipha isamba semali engama-322.000 kuma-euro ayizi-400.000 ngokweshumi
Isichazamazwi esincane sokutshala imali emakethe yamasheya
Akungabazeki ukuthi ukujwayela okukhulu imigomo yemakethe yamasheya kuzosiza abatshalizimali ukuthi bakwazi kangcono ukufeza ezimakethe zamasheya kuzoba namagama amaningi ezobuchwepheshe angafakwa esichazamazwini esincane semigomo yezomnotho
Ngabe Abatshalizimali Bayashiya Emakethe Yamasheya?
Ukwesaba ukuthi ukuwa kwezimakethe zamasheya zomhlaba wonke kungenzeka kwenzeke kudala ingxenye enkulu yabatshalizimali abancane nabaphakathi ukuba babe Nokwesaba ukuthi ukuwa ezimakethe zamasheya zomhlaba wonke kungenzeka kwenzeke kubangela ukuthi ingxenye enkulu yabatshalizimali abancane nabaphakathi babe uqaphile
Tshala imali ngamanani aqagelayo kakhulu emakethe yamasheya
Ukutholakala kwemali ephansi kwalezi zivikelo, okwaziwa nangokuthi i-chicharros, kuyisici esivimbela abatshalizimali ukungena noma ukuphuma ezikhundleni zabo.Ngaphansi kwehlelo lezokuphepha okucatshangelwayo, kufakwe uchungechunge lwamagugu ayizici zamasheya aseSpain.
Iyini intela yokubhalisa?
Ngaphakathi kokukhona intela engaqondile, enye yezindawo ezidume kakhulu yilowo obizelwe ekubhalisweni, phakathi kwezinye izizathu ngoba kuthinta wonke umuntu.Ngaphakathi kwentela engaqondile, enye ethandwa kakhulu yilowo obizelwa ekubhaliseni futhi othinta izinkulungwane zabasebenzisi
Yini engenziwa ngesonto eledlule emakethe yamasheya?
Njengoba sekunezinsuku ezimbalwa kuze kuphele omunye unyaka wemakethe yamasheya, mancane kakhulu amasu ongahlangabezana nawo ukuvala unyaka ngempumelelo ngokwenani Laphakathi kweviki lokugcina lonyaka umtshali-zimali uzokwazi ukuthatha izinyathelo ezithile ukunciphisa ukulahleka emakethe yamasheya ayiqongelele kule minyaka